Praiminisitra Mahafaly Olivier : Naneho ny heviny momba ny raharaha Befandriana -
AccueilRaharaham-pirenenaPraiminisitra Mahafaly Olivier : Naneho ny heviny momba ny raharaha Befandriana
06/03/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tsy nahavita ny iraka nampanaovina azy ny minisitry ny Filaminam-bahoaka teo aloha, Anandra Norbert. Nohamafisin’ny Praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier mihitsy koa anefa izany. Nambaran’ny praiminisitra mantsy fa tsy misy hifandraisany amin’ny raharaha Befandriana Avaratra, tany amin’ny toerana atao hoe Antsakabary mihitsy ny nanesorana sy nanoloana ny minisitry ny Polisy. “Tsy misy hifandraisany velively amin’ny zava-nitranga tany Befandriana Avaratra mihitsy ny nanoloana ny minisitry ny Filaminam-bahoaka. Nisy andraikitra sy iraka nampanaovina azy sy niandrasan’ny governemanta taminy ary tsy tontosany sy tsy tanteraka izany ka voatery niroso tamin’iny fanapahan-kevitra iny fitondram-panjakana”, hoy ny praiminisitra.
Ankoatra izay, nilaza ny tsy hamaly ary tsy hiteny mihitsy mahakasika ny fanambaran’ny Sojabe avy amin’ny Faritra Sofia ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier mikasika ny fametraham-pialany amin’ny toerana sy andraikitra sahaniny amin’ny maha lehiben’ny governemanta azy. Nanazava ny tenany fa raiaman-dreny ny Sojabe ary raiaman-dreny ihany koa ny tenany. “Tsy hamaly na dia teny iray aza aho fa amiko, raiaman-dreny ny Sojabe. Raiaman-dreny natao hananatra sy natao hampihavana izy ireo fa tsy natao hampisara-bazana”, hoy hatrany ny Praiminisitra.
Etsy andaniny, nomarihin’ny Praiminisitra koa fa tokony hitandrina ny tsirairay amin’ny feo miely sy ninian’ny sasany naely amin’ny fanaratsiana tsotra izao ny fitondram-panjakana. Nambarany fa efa eo am-pandinihina ny fidinana ifotony any Antsakabary ny Filoham-pirenena sy ny governemanta tarihin’ny Praiminisitra.
Ravalomanana Marc : Tsy manaiky ny fanonganam-panjakana ataon’ ny Mapar
Tonga saina, nifoha tamin’ ny torimasony ary niverina tao an-tsain’ity filoha teo aloha izay naongan’i Andry Rajoelina ity ny taona 2009, ka antony nanaovan’i Ravalomanana Marc fanambarana omaly tany Mahajanga fa tsy manaiky fanonganam-panjakana ny ...Tohiny
Hery Rajaonarimampianina : « Tetikasa 20 hovitaina hatramin’ny faran’ny taona »